Haddii aad doorato ka dib, aad bedesho maskaxdaada, waad ka noqon kartaa ogolaanshahaaga annaga inaga lala soo xiriirno, ururinta sii wadata, isticmaalka ama bixinta macluumaadkaaga, wakhti kasta, nagala soo xiriir
Wixii faahfaahin dheeraad ah, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad akhrido Shuruudaha Adeegga ee halkan ama Qoraalka Qarsoodiga halkan.
Gaar ahaan, xasuuso in bixiyeyaasha qaarkood laga yaabo inay ku yaalliin ama ay leeyihiin tas-hiilaadyo ku yaal meelo kala duwan oo ka duwan kuwa adiga ama annaga. Sidaa darteed haddii aad dooratid inaad sii wadato macaamil ganacsi oo bixiya adeeg bixiyaha adeega saddexaad, ka dibna macluumaadkaaga waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco shuruucda qaanuunka (yada) ee adeeg bixiyaha ama xarumaheeda ku yaal.
Haddii aad na siiso macluumaadka kaarka deynta, macluumaadka waxaa lagu qortaa iyada oo la isticmaalayo tiknoolajiyada lakabka ah ee sirta ah (SSL) oo lagu keydiyay AES-256. Inkasta oo aan jirin habka loo gudbiyo internetka ama kaydinta elektaroonigga waa 100% ammaan ah, waxaanu raacnaa dhammaan shuruudaha PCI-DSS iyo hirgelinta heerarka warshadaha guud ee la aqbalo.
Halkan waa liisto koobiyaal ah oo aan isticmaalno. Waxaan halkan ku taxnaa halkan si aad u dooran kartid haddii aad rabto in aad ka baxdid cookies ama haddii kale.
7 QAYBTA - DA'DA EE OGGOLAANSHAHA
8 QAYBTA - isbedel SIYAASADDA ASTURNAANTA THIS
Haddii aad jeclaan lahayd inaad: Heliso, saxdo, isbeddesho ama tirtirto macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan kaa hayno, diiwaangelin cabasho, ama aad rabto macluumaad dheeraad ah nala soo xiriir